Puntland oo u magacbixisay dagaalka ay kula jirto Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maamulka Puntland, oo muddo todobaad ah dagaal kula jiro kooxo ka tirsan Alshabaab oo doonyo ku tegay xeebaha gobollada Mudug iyo Nugaal ayaa magac u bixiyay howlgalka ka dhanka ah Alshabaab-ka halkaas tegay.
Maamulka Puntland oo xoogga iska soo gooyey si uu uga hortago Alshabaab-ka ka tegay qeybo ka mid ah gobollada Koonfurta Soomaaliya ee gaaray deegaanadooda ayaa howlgalka raggaas ka dhanka ah ugu magac daray “Duufaanta Badweynta Hindiya”.
Ciidamada Daraawiishta Puntland oo haataan warbaahinta deegaankaas ugu yeerto Puntland Defense Forces (PDF) oo macnaheedu yahay “Ciidamada Difaaca Puntland” ayaa guulo ka sheegnaya dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaannada SUUJ, GURMAAL iyo KOR-DHAFARUUR, oo ka kala tirsan Nugaal iyo Mudug.
Alshabaab ayaan iyagu ka hadlin dagaalka ka socda xeebaha gobollada Nugaal iyo Mudug, inkastoo markii hore saraakiil ka tirsan ay sheegteen iney ciidamo u direen deegaanada Puntland.